အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ: လူမှုရေးဂိမ်းများစီးဆင်းခြင်းကိုခံစားခြင်း (2019) - သင်၏ Brain On Porn
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ: လူမှုရေးဂိမ်း၏စီးဆင်းမှု Feeling (2019)
ပြုမူနေကိုယ်စားလှယ်စွဲ။ 2018 အောက်တိုဘာ 24; 9: 100140 ။ Doi: 10.1016 / j.abrep.2018.10.004 ။
ဟူ E ကို1, Stavropoulos V ကို1, Anderson ကတစ်1, Scerri M က1, Collard J ကို1.
ဂိမ်း Disorder (GD) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ကရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11) ၏မကြာသေးမီကထုတ်ဝေဖို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာအမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကထုတ်ပေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM-5) အတွက် Diagnostic စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်၏ပဉ္စမထုတ်ဝေ၏ထောက်ခံချက်များနှင့်အတူ aligns ။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်သက်ဆိုင်ရာသုတေသနကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းလူမှုရေးဂိမ်းအမျိုးအစားများများအတွက်ဦးစားပေးအကြားဆက်စပ်မှုတွေ, အွန်လိုင်း Flow ၏ဘွဲ့ (သို့မဟုတ် စွဲငြိဖွယ်ရာအပျော်အပါး) အတွေ့အကြုံရှိသူနှင့်ကစားသူ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကျား / မရေးရာကို IGD ၏ပံ့ပိုးပေးသောအချက်များအဖြစ်ဤနေရာတွင်စစ်ဆေးခဲ့သည်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအင်တာနက်ဂိမ်းကစားတဲ့စံတန်ဖိုးနမူနာ (အွန်လိုင်းစုဆောင်းခဲ့သည်N = 237, အသက် = 18-59, အထီး = 157; ၆၆%၊ အမျိုးသမီး = ၈၀; 66%) ။ ပါ ၀ င်သူများသည်ကိုးဂဏန်းရှိသော Internet Gaming Disorder Scale-Short Form (IGDS-SF80)၊ Online Flow Questionnaire (OFQ) နှင့်ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောလူ ဦး ရေစာရင်းနှင့်အင်တာနက် / ဂိမ်းကစားနည်းများကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ဖျန်ဖြေအွန်လိုင်း Flow များ၏အဆင့်ကိုသိသိသာသာလူမှုရေးဂိမ်းအမျိုးအစားများများအတွက်ဦးစားပေးများနှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဇီဝဗေဒလိင်ဖြတ်ပြီး IGD အပြုအမူတွေများ၏ပြင်းထန်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ကမကထပြုခဲ့ကြုံတွေ့ကြောင်းညွှန်ပြလေ့လာဆန်းစစ်။
ရလဒ်များအွန်လိုင်း Flow ၏အဆငျ့ IGD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆက်စပ်. တစ်အန္တရာယ်အချက်ပါဝငျကြုံတွေ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပွငျ, ဂိမ်းများပေးသောအွန်လိုင်း Flow ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်အခြားသူများနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်အရှင်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဆိုပါဂိမ်း၏ဇီဝကျား၏ IGD အန္တရာယ်တိုးမြှင့်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့်ကန့်သတ်မှုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
KEYWORDS: စီးဆင်းမှု; ဂိမ်းစွဲ; အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ; ဂိမ်းကစားခြင်းလွန်ကဲကဲ multiplayer အွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ဍ; multiplayer အွန်လိုင်းစစ်တိုက်နယ်ပယ်တွင်; အွန်လိုင်းစီးဆင်းမှု; လူမှုဂိမ်း